Paul Formosa oo ahaa madaxii dekada Boosaaso ee la dilay oo aas loogu sameeyay dalkiisii - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldPaul Formosa oo ahaa madaxii dekada Boosaaso ee la dilay oo aas loogu sameeyay dalkiisii
February 18, 2019 Puntland Mirror World 0
Meydka Paul Formosa oo la siyo kahor inta aan la aasin. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ninkii u dhashay dalka Malta kaasoo lagu dilay gudaha magaalada Boosaaso labo asbuuc kahor ayaa maanta lagu aasay dalkiisii.
Paul Formosa waxaa toogtay oo dilay nin hubeysan oo katirsan Al-Shabaab 4-tii Febaraayo meel u dhow dekada Boosaaso.
Paul ayaa ahaa madaxii shirkada DP World ee dekada Boosaaso.
Aaskiisa oo ka dhacay deegaanka Marsascala ayaa waxaa ka qeybgalay qoyskiisa, sida ay ku warameen warbaahinta Malta.
Ninkii Al-Shabaab-ka ahaa ee dilay Paul oo dhaawac lagu qabtay ayaa isbitaalka Boosaaso ku geeriyooday habeenimadii 5-tii Febaraayo.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa wacad ku maray in ay ciqaab la kulmi doonaan cid walba oo ku lug leh arrintan, balse weli ma jirto cid maxkamad loo soo taagay kiiskaas.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa wadahadal ku yeeshay khadka taleefoonka waxayna isku afgarteen in ay ka wada shaqeeyaan sugida xuduuda u dhaxeysa, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya maanta oo Khamiis [...]